HCC Ambohidahy : nataon’ny Emmo/Sec andrimaso ny hetsiky ny mpanao gazety | NewsMada
HCC Ambohidahy : nataon’ny Emmo/Sec andrimaso ny hetsiky ny mpanao gazety
Efa toy ny any amin’ny tany miady sy misy hotakotaka ? Rakotra mpitandro filaminana marobe vao maraina, amin’ny alalan’ny Emmo/Sec, ny teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) Ambohidahy, omaly. Notomerin’izy ireo ny hetsiky ny mpanao gazety natao hampieritretana ireo mpitsara avo.
Nahitana azy ny Emmo/Sec avokoa tao anatin’ny lapa sy ny ety ivelany ary ny manodidina rehetra toy ny mihazo ny minisiteran’ny Varotra. Eo koa ireo niatrana tamin’ny lalana miditra ny HCC. Ny mpanao gazety nanao ny hetsika kosa, teo amin’ny toerana malalaka, afovoany fiantsonan’ny taxi mialoha ny hidirana ny tonelina Ambohidahy. Tsy azon’ny fiara naleha ny faritra sasany noho ny sakana nataon’ny Emmo/Sec. Anisan’ny anton’ny hetsika ny fampisaintsainana ny eo anivon’ny HCC fa ho zava- doza raha hampiharina io lalàna nolanian’ny parlemanta io ary ho lalàm-pamoretana amin’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety sy ny fahafahana. « Mifanohitra amin’ny lalàmpanorenana tanteraka ny andinin-dalàna amin’io lalàna lany io. Mifanohitra amin’ny fahazoana misehatra ho amin’ny fandraharahana koa », hoy ny mpitondra teny, Rakotondrasoa Fetra. Nanteriny fa efa natao avokoa ny dingana rehetra saingy manao bemarenina ny fitondrana ka izao iandrasana ny fanapahan-kevitry ny HCC izao. Teo koa ny antso avo sy ny taratasy nalefa amin’ny filoham-pirenena mba hampiharany ny fahefany araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana hamerina ny handinihan’ny parlemanta indray io lalàna io. « Tsy nisy resaka ka nahatonga izao hetsika eto izao », hoy ihany izy.
Fialana nenina ataon’ny mpanao gazety
Nanantitra ny mpanao gazety, Lalatiana Rakotondrazafy, fa efa nanao hetsika samihafa ny mpanao gazety. « Mpanao gazety teo aloha ny filohan’ny HCC ka tsy tokony hanohitra fa mba tokony hiaro sy hanavotra ny asa fanaovan-gazety. Tsy tokony hitsara amin’ny fomba mitanila izy ireo… », hoy izy. Nambarany fa tokony hifanaraka amin’ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona ny lalàna eto amintsika ka tiana ny hisarihana ny sain’ny mpitsaran’ny HCC izany. « Ambonin’ny lalàna eto amintsika ny lalàna iraisam-pirenena. Raha tsy hamaly sy hanao bemarenina ny HCC, hitodika any sehatra iraisam-pirenena isika… Ala nenina izao ataonay izao », hoy izy. Eny Ambohidahy izany izao ny baolina.